mardi, 31 mars 2020 14:03
Tetsy sy teroa: Ny harona no milahatra mielanelana 1m
Tetsy sy teroa: Ny harona no milahatra mielanelana 1m fa ny olona mitangorona miresaka sy miandry ary manantona birao.
Coronavirus: Miisa 14 ny fitiliana avy ao Mahatsiatra Ambony nalefa any amin’ny Institut Pasteur
Nitondra fanazavana ny Governoran’i Mahatsiatra Ambony, Razafindrafito Paupil, mikasika ny zava-misy ao amin’ny Faritra iadidiany manoloana ity valanaretina coronavirus ity. Momba ilay « Cas confirmé » voalazan’ny Filoham-pirenena, ny alin’ny alatsinainy 30 marsa, dia Ramatoa iray, 61 taona, isan’ireo mpandeha tamin’ny sidina MK288 tonga ny 19 Marsa 2020. Isan’ireo olona 8 izay nanao fihibohana tany amin’ny hotely io olona voamarina fa mitondra tsimokaretina io. Mipetraka eny Antamponjina ary misy 9 no anatin’ny fianakaviana. Efa manaraka fitsaboana eny amin’ny CHU Andrainjato avokoa izy ireo amin’izao fotoana izao, hoy ny Governora Razafindrafito Paupil.
mardi, 31 mars 2020 11:53
Coronavirus: Miandry fatratra ireo fitaovana ny hopitaly sy ny mpitsabo aty Ambanja
Manoloana ny fipariahan'ny valanaretina coronavirus, dia maneho ny tebitebiny ireo dokotera sy mpiasan'ny fahasalamana aty amin'ny faritry Sambirano Ambanja, fa hatreto dia tsy misy fitaovana fiarovana ho an'ny dokotera, na fitiliana, na ny fitaovana hiatrehana ny mety fidiran'izany otrikaretina izany aty amin'ny faritra. Manao antso avo izy ireo ny hisian'izany fitaovana izany aingana, raha sanatria misy tampoka ny trangan'aretina. Hatreto aloha dia tsy mbola misy ahiana aty Ambanja, na dia io resaka coronavirus io avokoa no ambetin-dresaky ny mponina aty an-toerana. Misy "barrage sanitaire" kosa ny miditra sy mivoaka ny tanàna eo amin'ny lalam-pirenena faha 6.
mardi, 31 mars 2020 11:22
Coronavirus: Nilaza nahita fanafody i Rosia
Ny sampana ara-pahasalamana federalin'i Rosia no nanao fanambarana fa nahita fanafody, hifehezana ny fipariahan'ny valanaretina coronavirus, antipaludique Méfloquine (chimioprophylaxie), karazana fanafodin'ny tazomahery ampiarahina amin'ny antibiotiques. 228 ireo tratran'ity aretina ity tao anatin'ny 24ora tany an-toerana, ka nahatrarana 1 264 manerana ny firenena rosianina hatramin'ny niatombohan'ny valanaretina, raha 6 hatreto ny azy no nodimandry. 49 amin'izao ireo efa sitrana. Mikatona avokoa ny sisitanin'i Rosia, ary efa hiditra amin'ny tsy fahafahana mivezivezy ny samy ao anatin'ny faritra rosianina izy ireo.
mardi, 31 mars 2020 09:30
Sary: Région Vakinankaratra
Coronavirus: Misy tranga mampiahiahy aty Antsirabe
Raha ny tatitra ataon’ny Centre OPS Covid19 Vakinankaratra ny 30 marsa 2020 dia misy tranga mampiahiahy aty Antsirabe, misy olona 44 arahi-maso manao fihibohana tamin'ireo 100 nanaovana fizaham-pahasalamana. Mbola maro ireo posy sy cyclo posy no tsy manaja ny fandaminana ary misy ireo taxi-brousse tsy nahazo fahazoan-dalana no minia miasa. Hihatra manomboka amin’ity talata 31 marsa 2020 ity ny “Couvre feu” eo anelanelan’ny amin’ny 8 ora alina hatramin’ny 5 ora maraina.
mardi, 31 mars 2020 08:41
Drafitra Sosialy: Tokantrano 24 000 no hisitraka azy
Raha teo amin’ny 10 400 no isan'ny zokiolona noheverina hisitraka ny tetikasa vonjy Tsinjo ho fampiharana ny Drafitra sosialy dia nanambara ny filoham-pirenena ny alatsinainy 30 marsa fa nampitomboina ho 24 000 ny tokantrano hisitraka izany fanampiana izany ho an'Antananarivo sy Toamasina.